ကိုရီးယား အဝေးအနီး ခေတ်ပြိုင်ရှုခင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ကိုရီးယား အဝေးအနီး ခေတ်ပြိုင်ရှုခင်း	Posted by mm thinker on April 28, 2013
Posted in: Book Review.	Tagged: Book Review.	Leaveacomment
စာမျက်နှာ ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဆောင်းပါးရှင် ၁၅ ဦး ပါဝင်ရေးသားထားသည့် အဆိုပါစာအုပ်တွင် ကိုရီးယား အနုပညာ လုပ်ငန်း၊ ကိုရီးယား ပညာရေး၊ ကိုရီးယားမီဒီယာ အစ၊ ကိုရီးယား ရိုးရာယုံကြည်မှု၊ ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ၏ သာရေးနာရေး၊ မြန်မာတွေ ကွမ်းစားမှု အလယ်၊ တောင် မြောက် ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် လုံခြုံရေးပဋိပက္ခများအဆုံး ကိုရီးယား၏ သရုပ်ကို “အနီးမြင်၊ အဝေးမြင်” စုံစုံစေ့စေ့ တင်ပြရန် ကြိုးပမ်းထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
စာအုပ်တွင် ပါဝင်ရေးသားသည့် ဆောင်းပါးရှင်များမှာ တောင်ကိုရီးယားတွင် အနည်းဆုံး ၆ နှစ်မှ အများဆုံး ၁၈ နှစ်အထိ နေထိုင်နေသူ၊ နေထိုင်ခဲ့ကြသူများဟု သိရသည်။
စာအုပ် စီစဉ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အယ်ဒီတာ ဝင်းပေါ်မောင်က “ဘယ်လိုစာအုပ် လုပ်မယ်၊ ဘာတွေ ထည့်မယ်၊ ဘယ်လိုထည့်မယ် ဆိုတာတွေကို စီမံချက်တခုအဖြစ် အသေအချာ ကြိုတင်ရေးထားတာပါ။ အဲဒါကို စာရေးလေ့ရေးထ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီ ပို့ပြီး တယောက်ချင်းနဲ့ တွေ့ဆုံ ရှင်းပြ ဆွေးနွေးပါတယ်။ သဘောတူသလား၊ ရေးမလား၊ ရေးမယ်ဆို ဘာရေးချင်လဲ စသဖြင့် ဆွေးနွေးပြီးမှ၊ စာရေးသူတွေကို အကြောင်းအရာ ရွေးချယ် ခွဲဝေပေးပါတယ်။ စာမူကိုလည်း မူကြမ်းအဆင့်မှာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆွေနွေး ဖြည့်စွက်ပြီးမှ အချောရေးစေပါတယ်။ တည်းဖြတ်ပြီး အဆင့်မှာလည်း ရေးသူရော အယ်ဒီတာပါ ကျေနပ်တဲ့ အထိ ဆောင်ရွက်ပါတယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
စာအုပ်၏ မာတိကာအပြီးတွင် “ဂန်နမ်းစတိုင်” အကသီချင်းနှင့် အဆိုတော် “ဆိုင်” ၏ ပုံဖြင့် တခန်းစီအတွက် ရောင်စုံပုံများ စုစည်းမှုက ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဆောင်းပါးများကို ကိုလူချစ် (ကိုရီးယား) ၏ “ကိုရီးယား အနုပညာ အင်ဒတ်စရီ” ဆောင်းပါးဖြင့် စဖွင့်ထားပြီး ကိုရီးယား အနုပညာလောက၏ သဘောသဘာဝ၊ နိုင်ငံတကာ ထိုးဖောက်နိုင်မှုများ၊ အနုပညာရှင်နှင့် နောက်ကွယ်က ထိန်းချုပ်နေသည့် အေဂျင်စီများ စသဖြင့် လူသိနည်းလှသည့် ကန့်လန်ကာနောက်မှ အခြေအနေများကို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ဖော်ပြထားသည်။ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲများမှ ဘဝနှင့် ဇာတ်ခုံနောက်ကွယ်မှ ဘဝများကို မြင်ရနိုင်သလို ကိုရီးယား အနုပညာရှင်များ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ကိုရီးယား အနုပညာလုပ်ငန်း၏ ခြေလှမ်းကျယ်မှုများကို တွေ့ရနိုင်သည်။
ကိုရီးယားတွင် ပညာသင်လိုသူများအတွက် မောင်မျိုး (စက်မှု) ၏ “ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ သော့တစ်ချောင်း – ကိုရီးယား ပညာရေးခရီး အတိတ်နှင့် အနာဂတ်” ဆောင်းပါးကို ညွှန်းလိုသည်။ ကိုရီးယား ပညာရေးစနစ် မိတ်ဆက်အပြင်၊ ကိုရီးယား တက္ကသိုလ်များ၏ အခြေအနေ၊ ကိုရီးယားတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း၊ ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ စသဖြင့် အချက်အလက်များ စာရင်းဇယားများ ထည့်ကာ ရေးသားထားသည်။
ကိုရီးယားတွင် အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများ မဖြစ်မနေ ဖတ်ရှုသင့်သည့် ဆောင်းပါးများမှာ ဝင်းပေါ်မောင်၏ “ဤခရီး မဝေးပါ”၊ ဝင်းလှိုင် (နန်းတော်ရှေ့) ၏ “စောင့်ရှောက်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ – ကျန်းမာရေး အာမခံနှင့် အတွေ့အကြုံ အချို့” နှင့် စိုးမိုးသူ၏ “ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား – ဖွံ့ဖြိုးမှုကမ္ဘာထဲက ပင်နယန်များ” တို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းဆောင်းပါးများတွင် ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ၏ သာရေးနာရေး အခက်အခဲများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မှု စသည့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သော အာမခံစနစ်များ၊ အနှိမ်ခံ၊ ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုခံ၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် ကိုရီးယားရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ဘဝတို့ကို စေ့စေ့ငုငု တင်ပြဆွေးနွေးထားကြသည်။
“ကိုရီးယားကို လာချင်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုရီးယားအကြောင်းကို သိထားရင် ကောင်းတာပါပဲ။ သတင်းမှားတွေ သိနေမယ့်အစား သတင်းမှန်တွေ သိတာက ပိုကောင်းတာပေါ့” ဟု အယ်ဒီတာ ဝင်းပေါ်မောင်က ဆိုသည်။
ပွင့်လင်းလာမှုနှင့်အတူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လေ့လာအတုယူသင့်သည့် ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ဝင်းပေါ်မောင်၏ “မြို့လယ်က တော – သဘာဝ ဝန်းကျင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ” ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ဂူသင်္ချိုင်း၊ စေတီ၊ ဆင်းတုတော်၊ မြို့ရိုး၊ နန်းတော်များ သိမ်းထိမ်းမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိဆောင် လုပ်ဆောင်ထားမှုများကို ရှင်းပြထားသည်။
စာအုပ်၏ နောက်ပိုင်း ဆောင်းပါး ၄ ပုဒ်ကမူ တောင်ကိုရီးယား၏ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း၊ တောင်-မြောက် ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ပဋိပက္ခ တင်းမာမှုများကို နားလည် သဘောပေါက်စေမည် ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယား အာဏာရှင်များ အကြောင်းမှသည် တောင် မြောက် ကွဲပြားပြီးနောက် စစ်ရေးတင်းမားမှုများအထိ တကဏ္ဍစီ ရေးသားထားကြသည်။
ခြုံငုံပြောရလျှင် ကိုရီးယားကို စိတ်ဝင်စားသော၊ ကိုရီးယား အနုပညာ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ မီဒီယာလောကတို့ကို လေ့လာချင်သော၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကိုရီးယားနှင့် မကင်းသောသူများအတွက် ကိုရီးယားမြင်ကွင်းစုံကို နားလည်သွားစေမည့် စာအုပ်တအုပ်အဖြစ် သုံးသပ်မိသည်။
“ဒီစာအုပ်ကို တကယ် အရေးပါတဲ့သူတွေ လက်ထဲ ရောက်စေချင်တယ်။ သူတို့က တဆင့် လူထုဆီ ပျံ့နှံ့သွားဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။ ဒီတော့ ရောင်းတာလည်း ရောင်း၊ ပေးတာလည်း ပေး လုပ်နိုင်ဖို့ စရိတ် စိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာအုပ်ကို ပရောဂျက်တခု အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကိုရီးယား မြန်မာ မိတ်ဆွေများရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ပူချွန်းမြို့ ယဉ်ကျေးမှုဖောင်ဒေးရှင်းက ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကို စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစိတ်တပိုင်းကိုတော့ ထောင်စုပြတင်း စာအုပ်တိုက် အနေနဲ့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စိုက်ထုတ်ရပါတယ်” ဟု အယ်ဒီတာ ဝင်းပေါ်မောင်က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလက ရန်ကုန်မြို့တွင် စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို လှူမည်ဖြစ်၍ အွန်လိုင်းက မှာကြားနိုင်ကြောင်းနှင့် မှာကြားတောင်းယူသော အရေအတွက် နည်းနေသေးကြောင်းလည်း အယ်ဒီတာ ဝင်းပေါ်မောင်က ဆိုသည်။
ကိုရီးယား၏ ခေတ်ပြိုင်ရှုခင်း အဝေးအနီးများ နားလည်လိုသူ၊ စူးစမ်းလိုသူများအတွက် “ယိမ်းနွဲ့နေသော ရောင်စုံကြာ” က အတိုင်းအတာတခုအထိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုချင်သည်။
← ကျောသား ရင်သား	မောင်သာရ ဝတ္ထုရှည် စာရင်း →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...